Pesita sy fantsy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Misy amin’ireo poety aza no namoaka sangan’asa imbetsaka satria nitombo betsaka ny marary sy isan’ny maty vokatry ny aretina pesita. Tsy tsaho intsony na dia nampigadra aza izany tany ampiandohana.
Nogadraina ilay bandy, nolazaina fa nanely tsaho
Hoe nirodana ny tonelina, ao an-drenivohitra ao
Notefena ny dosie, maika ery ny fikarohana
Ary andro vitsy monja : tonga ilay fisamborana.
Toy izany ilay tary, ampangaina ho nitsaho
Hoe efa efapolo no matin’ny pesita amin’izao
Tsy ampy herinandro akory, dia voasambotra i nedala
Rapida be ny fomba fiasa, rehefa ny madinika no misary adala.
Fa tsy nogadrainareo, ‘lay olona nilaza
Fa telo volana monja ny delesitazy dia ho rava
Nefa dia tsaho misy porofo, an-dradio sy an-gazety
Ary azonao jerena amin’ny interinety.
Dia tsy nosamborina mihitsy, ilay minisitra nitsaho
Fa voafehy hono ny pesita, milamin-tsaina izaho sy ianao
‘Zao ny gasy mihorohoro, miha-betsaka no dangy
Ny fahasalaman’ny vahoaka, ataonareo sangisangy.
Eto amintsika, be dia be, ireo ambonin’ny lalàna
Na folo taona aza mitsaho foana : tsy mba sahy hogadraina.
Mitombo ny isan’ny maty. Nahita mialoha ny zava-doza mitranga izao va re ireo milaza ho mpaminany ? Sa… tsy miresaka raha tsy efa mipoaka ny raha ?
Mpaminany sy ny Pesita
Fantsy kely adaladala, ho anareo mpaminany
Miàla tsiny indrindra, fa tsy maintsy hanontany
Ity pesita mandringana, ‘ngaha tsy azonareo nofy ?
Sa “ireo tompo” tsy nilaza, fa ho be ny maty sy marofy ?
Ao ianao r’ingahy Mailhol, ianao ho’aho toa mangina
Tsy miresaka ity pesita, fa ‘lay maika hofidiana
Maninona raha mba zaraina, ‘zay ampahafolon’ny azonao
Dia mba hahazo tampim-bava, ‘zao vahoaka rehetra izao !
Ary ianao ry Tatandraza, ianao ‘lay maikamaika hody
Sao dia pesita no làlana, sady siora fa hahomby
Sao manko ‘lay handeha irery, no tena atahoranao
Fa be dia be no hiray dia, alain’ny pesita amin’izao.
Ary ingama lava volo, mpanao “ctik ctak cdou”
Maninona ary ity pesita, tsy anaovanao “foa foa”
‘Zao anie no fotoana e, itilianay vahoaka
Hoe tsy mpimôly ianao, na sanatria mpimamo toaka.
Ary ianao koa toa nangina, ry apôstôly tsaratsara
Angaha tsy hofoananao, ‘ty pesita eto Gasikara ?
Mitenena indray màka, mba sitrano ireo marary
Izahay vahoaka misy anao, aza avelanao hijaly.
Be dia be ireo mpaminany, toa tsy misy manao ny asany
Mahagagagaga ihany, asa iza re no andrasany !
Nahoana moa izy ireo no omen-tsiny kanefa ny mpitondra aza tsy nahita kanefa izy ireo efa nahalala fa misy izany saison pesteuse izany ary vao miandoha anie ity saison ity ? Mpitondra midororororo zatra manao ampihimamba ary miandry ny fanampiana avy any ivelany no misy araka ny eritreritry ny olona maro.
‘Ra tsy ireo mpandroba,
dia pesita mandoza,
ireo vahoaka vizaka!
Ny fahantrana itony,
tsy lazaina intsony,
fa tandra vadin-koditra,
Mikiķy sy mandrotika!
Misy nefa indrisy,
sy tsy mihambahamba,
maka sy mandroaka,
Mirehaka fa tsara,
hay tsy valahara!
Soritana fa misy dia misy tokoa ny olona no manahy fa aretina noforonina izao mitranga izao, aretina nafafy hampihenana ny isan-dRamalagasy, aretina nafafy hahavery saina ny vahoaka ka afaka manararaotra ireo mpandromba harem-pirenena.
Pesita mifangaro politika
Mafy ny fako eny amoron-dalana
fa tsy laitran’aretina politika
malemy ny mpitsabo nomena alalana
hizaha ireo mararin’ny bibonika
Io ilay aretina noforonina
hanenana ny isan’ny Malagasy
mantsy ny mpitondra dia mila sorona
hanomanana fifidianana atsy ho atsy
Raha tany Toamasina no niandohana
dia efa ao Tana izao ilay rivotra naparitaka
mitady hanongana fanjakana
angamba ilay mpanaboka voahitsakitsaka
Raha hoe tena pesita marina io
fa tsy aretina nafafifafy
dia izao no fantaro ry ankehitrio
hoe efa maro no maty ny Malagasy
Rivotra nge izany pesita izany ry olona ee
mitsoka lavitra noho i Gafilo
ianao tsy afaka hanampina lavak’orona
rehefa maneno ilay rimorimo
Tsy azo tsidihana ilay marary
fa sao dia mamindra amin’ny olombelona
tsy azo alevina ambonin’ny tany
fa tonga dia dorana ho lasa lavenona
Tsy azo ampidirina am-pasan-drazana
fa sao dia mamindra amin’ny efa maty
tsy maintsy eny an-tanety no hamafazana
ireo matin’ny pesita ilay aretina piraty
Nahoana ianao ry mpanao politika rehefa mitsidika anay aty amin’ny lopitaly no manao fiarovan-tena hatrany antampin-doha ka hatrany ampaladia kanefa na ireo mpiasan’ny fahasalamana aza zara raha manana sarom-bava ? Fiangarana tsisy tahaka izany. Ka zary lasa paika ataon’ny sasany ny mikohoka. Araho anie e ny filaza izany e…
Nifandrombaka ny olona, nivoaka ny fiara
Tsy nifanontany ny antony, fa toa samy nahalala
Anefa, mody nikohaka aho, fa tery ny plasy
Dia noheverina ho mararin’ity pesita mahafaty.
Tonga tao amin’ny banky, filaharana aok’izany
Hatrany anatin’ny birao ka hatrany an-tokotany
Izaho anefa maika, ka mody nikohakohaka
Raima sy valo ny olona, nitsoaka nisahotaka.
Teny Mahamasina aho, te-hitsindroka firipy
Saingy marobe ny olona, ka tsy afa-po mihitsy
Mody niteha-tratra aho, sy nikohaka im-polo
Fa indray mipi-maso dia nangina ny tontolo.
Raha te-handrava fivoriana, andramo ny mikohaka
Fa hohitanao ny olona, mitsoaka mikoropaka.
Samy manana ny fanehoany ny fihetseham-po nanoloana ny firongatan’ny aretina pesita ity ny tsirairay. Moa renao va izany ahiahian’ny vahoaka entina izany ry mpitondra Fanjakana ? Enga anie… fa mbola lavitra anie vao ho tapitra ity saison pesteuse ity e. Mivavaha fa miasa mafy ihany aloha e ka aza diso adva…